काठमाडौँमा बालेन : वर्तमानको सोच र दिशाको मत किन नभन्ने ? – Online Kendra
काठमाडौँमा बालेन : वर्तमानको सोच र दिशाको मत किन नभन्ने ?
५ जेष्ठ २०७९, बिहीबार १७:०७ OnlineKendra
लोकतन्त्रको सबैभन्दा निर्विकल्प आधार स्तम्भ, जनताको प्रत्यक्ष सहभागिताको सुन्दरतम पक्ष निर्वाचनको परिणामलाई स्वीकार्न नसक्नेहरू वास्तवमा कति लोकतन्त्रवादी छन् भन्ने तथ्य पनि छर्लङ्ग भएको छ । राष्ट्रियता र लोकतन्त्रका मसिहा भनिने महान अभियन्ताहरूले गहिराईको मापन पनि बालेन जित उन्मुख प्रकरणले स्पष्ट देखिन थालेको छ ।
बालेन तराईका हुन् । तराईले आधुनिक नेपालको निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ र दिने क्रममा छ । विभिन्न आरोह अवरोहहरू होलान् तर २००७ सालदेखि लोकतन्त्रको निमित्त तराईको प्रतिवद्धता, संघर्ष र अभ्यासलाई कसैले नकार्न सक्दैन । तराई–मधेसको संघर्षले संघीयता र तीन तहको सरकार हामीले पाएका छौं । भ्रष्टाचार र तमाम विकृतिका बावजुद यसले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रमा विगत ४/५ वर्षमा आएको परिर्र्तनले मुलुकलाई नयाँ दिशा प्रदान गरेको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेनको उम्मेदवारी तथा त्यसले उठाएको तरंगले, त्यहाँ ल्याएको नयाँ सोच र जोशले तथा राजनीतिमा सिण्डिकेट मानसिकतामाथि गरेको चोटले निश्चय नै नयाँ नयाँ आयामहरू थपिनेछन् । काठमाडौंमा अब को रैथाने र को बाहिरिया ? यस्ता विषयमा सकारात्मक बहस गर्नुभन्दा पूर्व हामीले के कस्तो समाज र प्रणाली चाहेका हौं भन्ने विषयलाई आधारमा राख्नु आवश्यक छ । यदि लोकतन्त्र र संविधानलाई आधार मान्ने हो भने यस्ता प्रश्न अर्थहीन हुन जान्छन् ।
काठमाडौँमा रैथाने भनेपछि तराई, थरुहट र आदिवासी–जनजातिको क्षेत्रमा के कसो हुनुपर्ने यो पनि सोचनीय विषय हो । फेरि काठमाडौंमा रैथाने को ? नेवार वा यहाँ बसोबास गरेका बहुसंख्यक नेपालीभाषी ? त्यसमा मधेसी, मुस्लिम वा थारूहरू पर्न सक्छन् वा सक्दैनन् ? नेवारलाई हटाएर नेपालीभाषीहरूको मात्र वर्चस्वको हुनुपर्ने मानसिकता बोक्नेहरू समानताको समाजको अवधारणाका घोर बिरोधी हुन् । देश र देशका विभिन्न क्षेत्रका भाषा, संस्कृति र जीवन शैलीका अन्य अवयवहरू सबैका साझा सम्पत्ति हुन् । यसको संरक्षण र जिम्मेवारीको दायित्व पनि सबैको हो ।
Top Headline, विचारकाठमाडौँमा बालेन, काठमाडौँमा बालेन : वर्तमानको सोच र दिशाको मत किन न भन्ने ?, बालेन साह, बालेन्द्र उर्फ बालेन साह
एभरेष्ट बैंक लिमिटेडले गर्‍यो लुम्बिनीको परासीमा नयाँ शाखा विस्तार
बुटवल–११ को शिल कसले तोड्यो ? एमालेमाथि कर्मचारी परिचालन गरेको आरोप